FEELM = Qinisekile Zizwe + I-Metallic Film
I-FEELM inentshisekelo yokuthuthukisa isipiliyoni sabantu ababhemayo abadala ngobuchwepheshe obusha kanye namadivayisi we-vaping. Ukuhlanganisa i-Metallic Film ne-Ceramic Conductor, lobu buchwepheshe bezinguquko buyimpumelelo Yezinto Zendabuko kanye neSayensi Yezakhiwo, ezimele umngcele omusha embonini ye-vaping atomization.
I-FEELM ifanelana kahle neFilm Vaping Technology kuClosed Pod System, iletha ukunambitheka okuhle nokuhlangenwe nakho okungajwayelekile kwabathandi be-e-cigarette, nokubhema kwangempela kubazwela abantu abadala ababhemayo.
Ubuchwepheshe be-FEELM basungulwa ngo-2016 ngabakwa-SMOORE International Holdings Limited (i-Stock Code: 6969.HK), inkampani yabazali be-VAPORESSO, CCELL ne-METEX.
Amalungelo obunikazi Emhlabeni Wonke
Ukwabiwa Kwemakethe Yomhlaba Wonke
• ISMOORE yasungulwa
• Ngokusebenzisana noNOOY, kwethulwe INKOSI
• Kubanjiswene ne-Altria, yakhiwe ifemu ekhethekile iMarkTen
• Isikhungo se-R & D esihola phambili ezimbonini, sigxile ku-Ceramic Heating Technology
• Kuthuthukiswe isizukulwane sokuqala seCeramic Coil T28
• Isungulwe iS SMOORE Changsha Research Institute
• Kwethulwe iT29 Metallic Film Ceramic Coil
• Isungulwe ISIMOORE Shenzhen Research Institute
• Ngokusebenzisana no-RJ Reynolds, wethule uVuse Alto
• Ihlanganiswe ne-BAT, yethule i-Vype ePod
• Kubanjiswene neRELX, kwethulwe iRELX Classic eChina
• Yethulwe i-NJOY ACE
• Kumenyezelwe umhlaba wonke uphawu lomkhiqizo we-Heating Technology i-FEELM, iwine ama-Golden Leaf Awards
• Inani lokuthengisa le-FEELM ngaphakathi kwama-pods lidlule i-100 Million
• Kukhishwe i- "FEELM ngaphakathi" Uphawu Lokuhweba Lokuqinisekisa Ubuchwepheshe
• Yakhelwe ngokubambisana i-E-cig Exclusive Factory Yomhlaba Enkulu nge-RELX
• Amandla wokukhiqiza we-FEELM ngaphakathi kwama-pods adlule izingcezu ezi-1 Billion
• I-Ceramic Heating Technology ithole i-1st China Patent Excellence Award kule mboni
• Isikhungo Sokuhlaziya Nokuhlola Esincane sidlulise ukuhlolwa kokuhlolwa kwe-CNAS
• Kusungulwe iSMOORE Tangshan Research Institute
• I-SMOORE efakwe ku-HKEX (ikhodi yesitoko: 6969.HK)
• Won iF Design Award 2020
• Isetshenziselwe amalungelo obunikazi angaphezu kwe-1600 Global
Eyasungulwa ngo-2006, iSMOORE International Holdings Limited iyiNational High-tech Enterprise nomholi ohlonishwayo emhlabeni ekuhlinzekeni izixazululo zobuchwepheshe be-atomization. It is ezikhethekile atomization ubuchwepheshe kanye nentuthuko, yokukhiqiza kanye yokuthengisa abaqhubi bobumba.
ISMOORE inaka kakhulu i-R & D kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha. Ngamalungu ayisisekelo aphothula emanyuvesi aphezulu njengeGeorgia Institute of Technology, iPurdue University, iTinghua University, kanye neChina Academy of Science, uSMOORE manje ungumnikazi wamalungelo obunikazi angaphezu kuka-1600 emhlabeni jikelele, ehlanganisa imikhakha eminingi njengabaqhubi be-ceramic nama-athomu kagesi.
Ngenxa yobuchwepheshe be-atomization onqenqemeni, imikhiqizo ye-SMOORE ithole izitifiketi ze-WM, RBA, EICC, BSCI, GMP, cGMP kanye ne-TUV futhi zithunyelwe emazweni angaphezu kwama-50 nezindawo emhlabeni wonke. Ukuqhubeka nokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo, I-SMOORE isibe yipulatifomu yezobuchwepheshe ehola phambili emhlabeni, yamukelwa kabanzi futhi yathandwa ngabasebenzisi bokugcina.
Ngenxa yobuchwepheshe obuphambili be-R & D, umthamo wokukhiqiza oqinile, iphothifoliyo yomkhiqizo obanzi kanye nezisekelo zamakhasimende ezahlukahlukene, ngokusho kukaFrost & Sullivan, uSMOORE wayengumkhiqizi omkhulu kunabo bonke emhlabeni wezimali ngokuthola imali, ebala u-16.5% wesamba semakethe esiphelele, ngo-2019.
Ugwayi Wokushisa, Ugwayi we-E Liquid Vapor, I-E Cigarette Blister Pack, Ukubhema Okuhlukile, I-Epen, Ugwayi waseNewport E,